Kedu ihe bụ Nhọrọ & Wen SAMO Nhọrọ? Samoyedcoin
Dị ka ọ dị n'ahịa ọ bụla na-abịarute afọ, crypto ahụla n'oge na-adịbeghị anya mgbawa na ngwaahịa ntinye ego ọhụrụ maka ndị na-azụ ahịa ahịa iji nweta aka ha. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-eso ụzọ na-akpakọrịta n'ahịa ntụpọ, ịrị elu nke ngwaahịa ntinye ego na-emepụta adọtala ndị sonyere ahịa ọhụrụ na ndị dị adị. N'oge na-adịbeghị anya, crypto ahụla ịrị elu nke "nhọrọ," nke na-enye ndị na-eso ahịa ahịa nwere ike ime ka ọ dịkwuo elu ma na-amachikwa ọdịda ha. Agbanyeghị, ole na ole ghọtara nhọrọ, ihe egwu ha na ebe ha ga-esi zụọ ahịa.
Na post a, anyị na-akụrisị ihe nhọrọ bụ, ihe kpatara eji ha, ihe egwu ha nwere, yana otu esi enweta paws gị na nhọrọ SAMO. Mgbe ị gụchara akwụkwọ a, ị ga-aghọta nke ọma ihe nhọrọ dị na ma ha dabara gị ma ọ bụ na ha adabaghị.
Kedu ihe Heck bụ nhọrọ?
Nkwekọrịta nhọrọ bụ ụdị ngwá ọrụ ego bara uru dabere na ọnụahịa nke cryptoasset dị n'okpuru, dị ka BTC, SOL, ma ọ bụ SAMO. Mana n'adịghị ka ntinye ego na-emepụta ihe ndị ọzọ, ndị na-ejide nhọrọ anaghị achọ ịzụrụ ma ọ bụ ree cryptoasset. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, nhọrọ na-enye onye nwe ya ikike, ma ọ bụghị ọrụ, ịzụrụ ma ọ bụ ree ego buru ibu nke crypto na ọnụahịa a kara aka (ọnụahịa nkwụsị) n'ime oge a kapịrị ọnụ. Ọtụtụ mgbe, mgbe ịzụrụ nkwekọrịta nhọrọ, ị ga-akwụ ụgwọ otu oge mara dị ka “premium” nhọrọ.
A nhọrọ oku na-enye gị ikike ịzụrụ cryptoasset, ebe a tinye nhọrọ na-enye gị ikike ire cryptoasset n'ọnụ ọnụ ahịa. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịzụrụ nhọrọ oku SOL nwere ọnụ ahịa nkwụsị nke $100 yana ntozu ọnwa abụọ, ị nwere nkwekọrịta na-ekwu na ị nwere ikike ịzụta SOL na $100 n'ime ọnwa abụọ na-abịa. Ọ bụrụ na dịka ọmụmaatụ, SOL na-ebili na $140, nkwekọrịta nhọrọ gị bụ uru ("na ego") ebe ị nwere ike ịzụta na ọnụ ahịa dị ala karịa ọnụahịa SOL ugbu a. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụrụ na ịzụrụ SOL tinye nhọrọ na ọnụ ahịa nkwụsị nke $100 na SOL na-aga $140, nkwekọrịta gị "na ego" ebe ọ bụ na ọnụahịa nke ị nwere ike ree SOL dị ala karịa ọnụahịa SOL ugbu a.
Iji nwetaghachi, nhọrọ ọ bụla nwere ihe ndị a:
Crypto dị n'okpuru nke enwere ike zụta ma ọ bụ ree.
Ọnụ ahịa iku, ma ọ bụ ọnụahịa a kara aka nke enwere ike zụta / ree crypto ahụ.
Oke ntozu, ma ọ bụ ụbọchị ikpeazụ enwere ike ịme nhọrọ.
Ọnụ ego, ma ọ bụ ego a kwụrụ maka nhọrọ.
Rịba ama na ọ bụghị nhọrọ niile ka emepụtara nhata. Tụlee ihe ndị a:
Nhọrọ ụfọdụ ga-efunahụ uru ma ọ bụ karịa dabere na ọnụahịa iku nke nhọrọ, ntozu nke nhọrọ, mgbanwe nke cryptoasset dị n'okpuru, na ndị ọzọ.
Ka ọnụ ahịa a na-akwụ ụgwọ dị nso na ọnụ ahịa akụ dị ugbu a yana ogologo oge na windo iji mee nhọrọ ahụ, ọ ga-adịkwu ọnụ ahịa ịzụta nkwekọrịta nhọrọ (ọnụahịa nhọrọ).
Enwere ike ịme nhọrọ ụfọdụ na ntozu oke (nhọrọ Europe) kama ịme ya na mbụ (nhọrọ America).
Ọtụtụ nhọrọ bụ ndị a na-edozi ego, nke pụtara na nnyefe anụ ahụ nke akụrụngwa ma ọ bụ nchekwa adịghị mkpa. Kama, ego ugwo nwere ike ịbụ ihe dị iche n'etiti ọnụahịa nkwụsị nke nhọrọ na uru crypto dị ugbu a na njedebe.
Yabụ… Gịnị kpatara eji ha?
Ekwesịrị iburu n'uche na nhọrọ abụghị maka onye ọ bụla, na ụfọdụ nhọrọ nwere ike ikpughe gị na mfu na-akparaghị ókè. Ọ dịịrị gị n'ikpeazụ ikpebi ma nhọrọ nwere ọnọdụ na pọtụfoliyo gị yana ọ dabara na nnabata ihe egwu gị.
Otú ọ dị, ndị ghọtara ihe ize ndụ ha ga-ejikarị nhọrọ iji jide ọnọdụ a na-akwụ ụgwọ na ihe onwunwe na ọnụ ala dị ala. Kedu? N'ihi na nkwekọrịta nhọrọ na-enyekarị onye nwe ya ikike ịzụta nnukwu mkpụrụ ego maka obere obere ego. Dịka ọmụmaatụ, nhọrọ oku na BTC na-enye onye nwe ya ikike ịzụta 1 BTC mgbe ọ na-akwụ ụgwọ naanị, sị, $1,000 - $2,000.
Ọ bụrụ na ejighị ya naanị maka leverage, ụfọdụ ndị na-eso ahịa ga-azụta nhọrọ dị ka "mgbochi" iji belata ihe ize ndụ nke mmegharị ọnụahịa ọjọọ. Dịka ọmụmaatụ, tụlee onye na-azụ ahịa ahịa nke chọrọ ịnọgide na-enwe BTC ha ma chọọ ichebe ka BTC daa na uru. Iji kpuchido itinye ego ha, ha ga-azụta a tinye nhọrọ. Ọ bụrụ na BTC daa na ọnụahịa, ha ga-erite uru site na ọdịda ebe ha ga-akwụ obere obere ego.
N'ikpeazụ, ụfọdụ ndị sonyere n'ahịa ga-eji nhọrọ iji nweta ego. Enwere ike nweta nke a site n'ịre nhọrọ oku, ire ntinye nhọrọ, ma ọ bụ ịchụso ọtụtụ usoro nhọrọ dị iche iche nke a na-azụta ma ọ bụ ree ọtụtụ nhọrọ na cryptoassets. Ụdị atụmatụ ego a na-ahụkarị maka nhọrọ bụ “oku kpuchiri ekpuchi,” nke anyị ga-abanye na-esote.
Dị ka e kwuru na mbụ, site na ịzụrụ a nhọrọ oku, ị nwere ikike ịzụta cryptoasset na ọnụahịa a kara aka n'ime windo setịpụrụ. Agbanyeghị, ị nwekwara ike ree nhọrọ oku nke ị ga-eji were akụkụ nke ọzọ nke ahia ahụ, nke a makwaara dị ka "ede" nhọrọ. Nke ahụ bụ, ị na-ekwe nkwa ire cryptoasset na ọnụ ahịa ekwenyero (ọnụahịa nkwụsị nke nhọrọ). Site n'ime nke a, ị na-enweta ego n'aka onye na-azụ ahịa ma na-adị mkpụmkpụ nke crypto - ị na-erite uru ma ọ bụrụhaala na ọnụ ahịa crypto dị ugbu a anaghị agafe karịa ọnụahịa nkwụsị. Chee echiche banyere nke a dị ka ịre elu ka ị nweta ego!
Iji chụba isi ihe n'ụlọ, ka anyị gafeta ọmụmaatụ site na iji Friktion's Volt#01, atụmatụ oku ekpuchiri.
Ọnụ ego SOL dị ugbu a $100, echere m na ọnụahịa SOL agaghị aga n'elu $125 n'izu na-abịa.
M na-ere nhọrọ oku na ọnụ ahịa nkwụsị nke $125 yana njedebe nke izu 1 - onye zụrụ m na-akwụ m ụgwọ.
M na-eche ugbu a ka izu ga-agafe na echiche na SOL adịghị arịgo n'elu $125.
Ọ bụrụ na SOL kubie ume n'okpuru $125, m na-edobe ego (nke a maara dị ka nhọrọ na-agwụ na-enweghị ego). Ọ bụrụ na SOL na-ekubi ume karịa $125, m ga-akwụ ụgwọ dị iche n'etiti ọnụahịa nkwụsị na ọnụahịa SOL na njedebe, ka na-anakọta ego mana na-efunahụ ụfọdụ SOL m.
Ugbu a, ọ bụrụ na m nwere otu crypto ahụ nke m dere nhọrọ oku megide, enwere m ike ịnakọta ego m nwetara n'aka onye na-azụta oku ma na-echekwa onwe m site na cryptoasset na-ebili na uru na nhọrọ oku na-aga megide m. A maara atụmatụ a dị ka "kpuchiri oku” n'ihi na m nwere otu cryptoasset nke m dere nkwekọrịta megide. Atụmatụ itinye ego a nwere ike ịbụ isi iyi na-akpata ego ma ọ bụrụhaala na cryptoasset adịghị adalata nke ọma.
Ọ dị mkpa iburu n'obi na, dị ka nkwekọrịta nhọrọ niile, nhọrọ oku ekpuchirighi na-enweghị ihe egwu ha. Ka e were ya na ọnụahịa nke cryptoasset tụfuru nnukwu uru, mfu sitere na ijide cryptoasset ga-akarị oke ego anakọtara. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị na-ere cryptoasset dị n'okpuru ebe ị ka na-ede akwụkwọ nkwekọrịta oku (nke a makwaara dị ka ijide "oku gba ọtọ"), nnukwu mfu nwere ike ime ma ọ bụrụ na cryptoasset ebili na uru.
Chọrọ ịmatakwu? Lelee ihe a vidiyo si Friktion gbasara ka atumatu oku kpuchiri arụ ọrụ!
Oku ekpuchiri SAMO?
Obi dị anyị ụtọ ịkpọsa na ndị na-ejide SAMO nwere ike iji Friktion ree oku mkpuchi na SAMO na cryptoassets ndị ọzọ. Ekele ndị otu Friktion, SAMO Volt na-enye ndị ọrụ ohere iwepụta mkpụrụ na-agafe agafe site na itinye SAMO ha n'ime volt na ire (ịde) nhọrọ oku na SAMO. Mara na SAMO Epochs ga-abụ izu 2!
Nke a bụ ka ọ si arụ ọrụ:
Nkwụnye ego nke SAMO na-emeghe na app.friktion.fi/income.
Ndị na-ejide SAMO na-etinye SAMO ha na SAMO Volt wee nata fTokens
Oge Epoch nke mbụ na-amalite na Fraịde na 2AM UTC, mgbe etinyere akụ iji dee oku ekpuchiri.
Friktion na-ejide ọrịre Dutch kpuru ìsì maka ndị na-azụ ahịa nhọrọ ka ha were akụkụ nke ọzọ nke oku SAMO nke edere.
fToken na-anọchi anya oke nke nwe gị na Volt.
Ọkwa gị na-amalite ịgbakọ na-akpaghị aka ka oge na-aga site na oke ego nhọrọ.
Oge Epoch bụ izu 2 (pụtara na 2AM UTC).
Enwere ike iji fToken wee gbapụta oke oke nke Volt gị.
Ị nwere ike soro mkpụrụ na ọnụahịa nke fcSAMO gị na ibe nyocha Friktion na app.friktion.fi/analytics/fcSAMO
Ihe ize ndụ SAMO volt:
Dị ka a tụlere na mbụ, oku kpuchiri ekpuchighị ihe egwu yana ọ ga-ekwe omume na mgbe ị gara ịgbapụta fTokens maka òkè gị nke SAMO, ị ga-enweta ọnụọgụ SAMO dị nta karịa ka etinyere na mbụ. Na mgbakwunye, dị ka nyiwe niile arụnyere na Solana, ị nwere ike tufuo ego echekwara n'ihi mbanye anataghị ikike a tụrụ anya ya.
Anyị na-atụ aro ka ị mara onwe gị nke ọma na nhọrọ, ihe egwu ha na ikpo okwu Friktion n'onwe ya. Ị nwere ike ịmụtakwu gbasara Friktion na Volts ha site na ịlele akwụkwọ ha Ebe a.
Dị ka ị na-ahụ, nhọrọ bụ ụzọ pụrụ iche nke isonye na ahịa crypto. Ngwa ego ndị a dị mgbagwoju anya na-enye ndị na-eso ahịa ohere ịbawanye elu ha, belata ọdịda ha, na n'ọnọdụ ụfọdụ, nweta ha abụọ. N'ezie, ha enweghị ihe ize ndụ, na onye ọ bụla nwere mmasị ịzụ ahịa ha kwesịrị ịghọta ihe ha na-abanye na ebe ihe nwere ike na-ezighị ezi. Ndị dị njikere iche ihe egwu nwere ike nweta mkpughe na oku mkpuchi SAMO site na SAMO Volt kacha ọhụrụ Friktion.